Petro saa obubuafo bi a ɔsrɛsrɛ ade yare (1-10)
Petro maa ɔkasa wɔ Solomon Abrannaa so (11-26)
“Wobesiesie nneɛma nyinaa” (21)
Odiyifo a ɔte sɛ Mose (22)
3 Da bi, na Petro ne Yohane rekɔ* asɔrefi hɔ. Ná ɛyɛ dɔn a wɔbɔ mpae, dɔn a ɛto so akron.* 2 Ná nkurɔfo so ɔbarima bi a wɔwoo no obubuafo. Da biara, na wɔde no ba asɔrefi pon a wɔfrɛ no Ɔpon Fɛfɛɛfɛ no ano. Ná wɔyɛ saa, sɛnea ɛbɛyɛ a obetumi asrɛsrɛ ade afi wɔn a wɔrekɔ asɔrefi hɔ no nkyɛn. 3 Bere a ohui sɛ Petro ne Yohane rebewura asɔrefi hɔ no, ofii ase srɛɛ wɔn sɛ wɔnkyɛ no ade. 4 Nanso Petro ne Yohane nyinaa hwɛɛ no dinn, na wɔkae sɛ: “Hwɛ yɛn.” 5 Enti ɔhwɛɛ wɔn dinn, na na ɔrehwɛ kwan sɛ wɔbɛkyɛ no ade. 6 Nanso Petro kae sɛ: “Dwetɛ ne sika kɔkɔɔ de, minni bi. Nea mewɔ na mede rema wo yi. Nasaretni Yesu Kristo din mu, nantew!”+ 7 Ɛnna Petro soo ne nsa nifa maa no so gyinaa hɔ.+ Na ɛhɔ ara na ne nan ne ne nanpɔwso yɛɛ den.+ 8 Afei ohuruw gyinaa ne nan so,+ na ofii ase nantewee, na ɔne wɔn kɔɔ asɔrefi hɔ. Bere a wɔrekɔ nyinaa, na ɔrenantew huruhuruw yi Onyankopɔn ayɛ. 9 Na nnipa no nyinaa hui sɛ ɔnenam hɔ reyi Onyankopɔn ayɛ. 10 Na wohui sɛ ɔno ne ɔbarima a na ɔtena Ɔpon Fɛfɛɛfɛ no ano wɔ asɔrefi hɔ+ srɛsrɛ ade no. Ne ho a na atɔ no no yɛɛ wɔn nwonwa yiye, na wɔn ani gyei papaapa. 11 Nea nnipa a ɛwɔ hɔ no hui no maa wɔn ho dwiriw wɔn boroo so. Enti bere a ɔbarima no da so kura Petro ne Yohane mu no, nnipa no nyinaa tuu mmirika kɔɔ wɔn nkyɛn wɔ baabi a wɔfrɛ hɔ Solomon Abrannaa+ no. 12 Bere a Petro huu eyi no, obisaa nkurɔfo no sɛ: “Israel mmarima, adɛn nti na eyi yɛ mo nwonwa saa, na adɛn nti na morehwɛ yɛn haa te sɛ nea gyama yɛn ankasa tumi anaa yɛn nyamesom pa so na yɛnam ma ɔnantewee? 13 Abraham ne Isak ne Yakob+ Nyankopɔn, yɛn agyanom Nyankopɔn no, wahyɛ n’akoa+ Yesu+ anuonyam. Yesu yi na muyii no mae,+ na bere a Pilato yɛɛ n’adwene sɛ obegyaa no mpo no, mokae wɔ Pilato anim sɛ munnim no.* 14 Nokwasɛm ne sɛ, nea ɔyɛ kronkron na ɔteɛ no, mokae sɛ munnim no,* na mosrɛe sɛ wɔmfa ɔbarima wudifo mmom mma mo,+ 15 ɛnna mukum nkwa Safohene+ no. Nanso Onyankopɔn nyan no fii awufo mu, na yɛyɛ saa nokwasɛm no ho adansefo.+ 16 Ɛnam ne din so, ɛne gyidi a yɛwɔ wɔ ne din mu so na ɔbarima a muhu no na munim no yi anya ahoɔden. Na ne mu gyidi na ama ɔbarima yi anya apɔwmuden korakora wɔ mo nyinaa anim yi. 17 Afei anuanom, minim sɛ nim a munnim nti na moyɛe,+ sɛnea mo atumfo no nso yɛe no.+ 18 Nanso Onyankopɔn nam saa kwan yi so ama nea ɔnam adiyifo no nyinaa anom so ka too hɔ no aba mu. Ɛne sɛ, ne Kristo no behu amane.+ 19 “Enti monsakra mo adwene,+ na monnan mo ho+ mma wɔmpopa mo bɔne.+ Sɛ moyɛ saa a, ahotɔ mmere befi Yehowa ankasa nkyɛn* aba, 20 na ɔbɛsoma Yesu, Kristo a wɔayi no ama mo no. 21 Ɔbɛtena ɔsoro akosi mmere a wobesiesie nneɛma nyinaa, sɛnea Onyankopɔn nam ne tete adiyifo kronkron no anom so kae no. 22 Nea ɛwom ne sɛ, Mose kae sɛ: ‘Yehowa* mo Nyankopɔn beyi odiyifo bi a ɔte sɛ me afi mo nuanom mu ama mo.+ Nea ɔbɛka akyerɛ mo biara, ɛsɛ sɛ mutie.+ 23 Nokwarem no, obiara* a wantie saa Odiyifo no, wɔbɛsɛe no koraa afi ɔman no mu.’+ 24 Na adiyifo no nyinaa, efi Samuel so besi wɔn a wodii n’akyi bae so no, wɔn a wɔkasae nyinaa kaa saa nna yi ho asɛm pefee.+ 25 Moyɛ adiyifo no ne apam a Onyankopɔn ne mo agyanom yɛe no mma.+ Ɔka kyerɛɛ Abraham sɛ: ‘Ɛnam w’aseni* so na asaase so mmusua nyinaa benya nhyira.’+ 26 Bere a Onyankopɔn maa n’akoa* no so no, odii kan somaa no baa mo nkyɛn+ sɛ ɔmmɛdan mo nyinaa mfi mo nneyɛe bɔne ho mfa nhyira mo.”
^ Anaa “reforo akɔ.”
^ Anaa “mopaa no wɔ Pilato anim.”
^ Anaa “mopaa no.”
^ Nt., “befi Yehowa anim.” Hwɛ Nkh. A5.